Global Voices teny Malagasy » “Ny Araben’ny Androany” Zava-misy ao Tokyo Asehon’ilay YouTuber Mimei · Global Voices teny Malagasy » Print
“Ny Araben'ny Androany” Zava-misy ao Tokyo Asehon'ilay YouTuber Mimei
Voadika ny 01 Avrily 2018 14:09 GMT 1	 · Mpanoratra N'Donna Russell Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
“Ny kafe an'i Takashi Murakami, gacha hafahafa & vilaogy tazan'i Nakano an'i Tokyo”. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube an'i Mimei .
Miaraka amin'ny fanehoan-keviny mavitribitrika sy tia namana amin'ny tontolon'ny mozika mamelombelona ao Tokyo, mampiseho ireo arabe isan-karazany ao amin'ny tanànan'i Japana be mponina indrindra, iray isan'andro ao ny amin'ny YouTube, Instagram , Twitter  ary tambajotra media sosialy hafa i Mimei  bilaogeran-dahatsary malaza monina ao Tokyo.
Nanatevin-daharana ilay tranonkala fizarana lahatsary i Mimei tamin'ny taona 2010, izay avy any Auckland, Nouvelle Zélande rehefa avy nonina tany Japana nandritra ny herintaona, sary notifiriny manokana izay atolotra ho an'ny mpijery Japoney ankehitriny ny “Mimei Land  (Tanin'i Mimei)”.
Manoritsoritra ny “Tanin'i Mimei” ho toerana “hizarana ny fiainako, ny zava-niainako sy ny zavatra hafahafa hitako” ho anao izy. Manana mpanjohy maherin'ny 162.000 ny fantsona YouTube an'i Mimei amin'izao fotoana izao ary nahangona jeripejy 14 tapitrisa mahery hatramin'ny nananganana azy tamin'ny Aogositra 2011.
Ireo mpankafy ny fantsona, izay tondroin'i Mimei amim-pitiavana hoe “Mananasy”, dia afa-mijery lahatsary mampiseho ny lafiny maro momba an'i Tokyo, manomboka amin'ny lalan-kely ao an-tanàna, hatramin'ny Distrika Fiantsenana ao Kagurazaka, sy ny fiampitàna malaza manerantany ao Shibuya. Saika manomboka amin'ny “Lalana Japoney Androany” ny lahatsary rehetra ary manasongadina ireo arabe maresaka avy amin'ny toerana samihafa manodidina an'i Tokyo. Jereo ny lahatsary fampidirany raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Mimei.
Malaza ihany koa ny kaonty Instagram an'i Mimei , manasongadina ny sarin'i Tokyo sy ny toerana hafa.
ok, i will let it go after this last picture 🌸 can't wait to see the cherry blossoms again next year ✨ 
A post shared by mimei  (@mimeiland) on May 24, 2017 at 4:05am PDT
Ankoatra ny fitrandrahana ireo harena miafina ao Tokyo , manasongadina lahatsary mitrandraka ireo toerana hafa mahaliana ao Japana ihany koa ny Mimei Land, anisan'izany ny Lapa Himeji sy ny serfa malaza ao Nara.
Mampiseho lahatsary momba ny diany tany amin'ny firenen-kafa ihany koa ny fantsona, anisan'izany i Korea Atsimo sy Alemaina.
spent the day at Himeji with my best friend in the world yesterday 🏯💕 昨日友人と一緒に姫路城に行ってきた☺️ 
A post shared by mimei  (@mimeiland) on Mar 3, 2018 at 4:54pm PST
Manampy ny hakanton'ny lahatsary ny zava mahaliana manokana an'i Mimei, amin'ireo lohahevitra samihafa manomboka amin'ny sakafo tsy misy hena ao Tokyo, manandrana ny milina fivarotana gashapon hafahafa (kilalao kapisily), sy manandrana ny zava-pisotro farany navoakan'ny Starbucks Japan. Nolanjalanjaina niaraka tamin'ny vilaogy (bilaogindahatsary ) madinika mampiseho ny vadiny, Japoney mpiray tanindrazana aminy mpisera Youtube PDR-san , ary saka telo ny fientanentanana tamin'ny fandraketana ny zava-niainany tany Tokyo.
Vita tamin'ny tifi-tsary mahafinaritra teny amin'ny faritra samihafa ao Tokyo ny lahatsary tsirairay, ary miaraka amin'ny mozika elektronika mahavariana, izay avy amin'ny fitiavan'i Mimei ny sary sy ny fikirakirana lahatsary avokoa izany rehetra izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/01/117056/
 Mimei Land: https://youtu.be/gsqJyq0NAps
 kaonty Instagram an'i Mimei: https://www.instagram.com/mimeiland/
 ok, i will let it go after this last picture 🌸 can't wait to see the cherry blossoms again next year ✨: https://www.instagram.com/p/BUeQjJMj3TW/
 harena miafina ao Tokyo: https://youtu.be/uH6MfhDFZbE
 spent the day at Himeji with my best friend in the world yesterday 🏯💕 昨日友人と一緒に姫路城に行ってきた☺️: https://www.instagram.com/p/Bf4cXPVHMKV/